Samsung Display nwere ike igosi Galaxy S3 na vidio 8 ndị a | Akụkọ akụrụngwa
Samsung Ngosipụta bụ a ụlọ ọrụ dị iche na Samsung Electronics nakwa na iji kwalite teknụzụ AMOLED nke ụlọ ọrụ ahụ, ọ na-eji ntụgharị ekwentị nke anyị na-eso n'izu ugbu a.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ike iji Galaxy S8 n'onwe ya n'ihu anyi nwere vidiyo atọ na-egosi ụfọdụ omume ọma nke teknụzụ AMOLED na ihuenyo. Ngwaọrụ anyị na-amụtakwu banyere ya.
Nke mbụ nke vidiyo na-elekwasị anya na n'elu akara uru nke na-enye Samsung AMOLED ngwaahịa na ogwe LCD. Nke a ga - abụ ihe dị iche na agba, nchapụta na ọkpụrụkpụ n'ichepụta ngwaọrụ ndị na-ebu ogwe ndị a.
Nke abụọ nke vidiyo bụ ihe gbasara ụkọ ọhụụ na agba ọbara ọbara-acha ọbara ọbara, ebe nke atọ dị na etu teknụzụ AMOLED Samsung nwere ike isi wedata ọkụ na-acha anụnụ anụnụ maka ahụmịhe kachasị mma n'abalị.
N'ime vidiyo atọ a, Samsung Display jiri a phablet ngwaọrụ Na akụkụ dị ka nsụgharị nke anyị ahụla nke ekwuru Galaxy S8. Ndị ahụ akụkụ dakọtara na ihe nzacha, ọ bụ ezie na na peculiarity na curved meziri na-egosi na ndị a sụgharịrị. Nke na-etinye anyị obi abụọ ma Samsung ọ ga - enwe ike ịmalite ọkwa Galaxy S8 nwere ọkọlọtọ.
Mgbasa ozi vidio bụkwa ihe ngosi nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị adị Galaxy S8 kwere omume nke ga-aga n'otu ụzọ ahụ dị ka Xiaomi Mi MIX; ekwentị ahụ na-enweghị bezels nke juru ọkara ụwa anya, o doro anya na ọ bụ nke ama ihuenyo niile karịa ihe ọ bụla ọzọ.
Ngwaọrụ Samsung nke ekwesiri ga-ehichapụ maka oge mbụ gịnị bụ home button ka ịgbanwee gaa na mebere igodo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Atọ Samsung Ngosipụta vidiyo nwere ike igosi Galaxy S8
UberEATS dị ugbu a na Madrid nwere ụdị nhọrọ dị iche iche